१० श्रावण २०७६, शुक्रबार ०८:१८
शरीरमा यी समस्या हुनेहरूले बिर्सेर पनि अदुवाको प्रयोग गर्नु हुँदैन! जानकारी सेयर गरौ
८ श्रावण २०७६, बुधबार ११:५३
बिषादीयुक्त भारतीय आँप खांदा मानसिक समस्या
२३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०२:३९
२ चैत्र २०७५, शनिबार ०५:५१
रसुवा । महिलाको पाठेघरमा हुने सक्ने समस्या समाधान गर्न रसुवा अस्पतालले हिमाली जिल्ला रसुवामा पहिलो पटक आफ्नो आन्तरिक जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । रसुवा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रामशरण कुँइकेलका अनुसार यहाँ कार्यरत दुई जना अनमीलाई तालीम दिएर दक्ष बनाइ ३० देखि ६० वर्षभित्रका महिलाको पाठेघरसम्बन्धी.....
जनशक्ति विहिन क्यान्सर अस्पताल
२ चैत्र २०७५, शनिबार ०५:३५
–काशीराम शर्मा बाँके । गत असार ११ गतेदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खजुरामा रहेको अत्याधुनिक प्रविधिसहितको अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त पूर्वाधार भने तयार भइसकेको छन् । अत्याधुनिक प्रविधिसहितका.....
२ माघ २०७५, बुधबार ०२:१६
ताप्लेजुङ । जिल्ला अस्पतालसँग दुई एम्बुलेन्स भएपनि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । एउटा एम्बुलेन्स वर्षाँैदेखि बिग्रिएर थन्किएको छ । गत भदौमा स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको अर्को एम्बुलेन्स अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारी अनुदानमा उपलब्ध सो एम्बुलेन्स.....
कब्जियतपछि पायल्स,कसरी बच्ने पायल्सबाट!
२६ पुष २०७५, बिहीबार ०२:५०
प्रायः मानिसले पायल्सको समस्या लुकाउने प्रयास गर्छन् । यसो गर्दा झन् ठूलो समस्या निम्तिने गर्छ । पायल्स हुँदा दिसासँगै मलद्वारको भित्री भाग पनि बाहिर निस्कने गर्छ । र, दिसापछि उक्त भाग भित्र पस्छ । समस्या जटिल बन्दै गएमा दिसाको वेला निस्किएको त्यस्तो मासु भित्र नपस्ने हुन्छ । यसरी हुन्छ मलद्वारको.....
हेर्ने कथाको नयाँ अङ्कामा “राउटेको कथा” (भिडियो हेर्नुहोस)
२९ मंसिर २०७५, शनिबार १७:३७
काठमाडौ । बिबिसी नेपालको प्रस्तुती चर्चित कार्यक्रम साझा सवालकी संचालिका विद्या चापागाईंले साझा सवाल छोडे लगतै कार्यक्रम "हेर्ने कथा" शुरु गरेकी छन । कार्यक्रम शुरु गरेको केही समयमा नै निकै लोकप्रिय बन्न सफल भएको छ । उनले कार्यक्रम हेर्ने कथामा अहिले सम्म हामिले नदेखेका बिकट ठाउका कथा हरु प्रस्तुत गर्दै.....